आफ्ना नागरिक कु’टिएपछि चीनले खोल्यो मुख, निकाल्यो कडा बिज्ञप्ति ! पुरा पढ्नुहोस !! – Eshankharapur
चिसोको समयमा कुर्कुच्चा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार..
गोर्खा सैनिकले मोदीलाई यस्तो गर्न अपिल गरेपछि भारतमा हंगामा ! अब के होला ?
चन्द्र सतहमा पानी रहेको नासा द्वारा पुष्टि, जीवनकाे सम्भावना !
Breaking:काठमाडौंमा भीषण आगलागी,दृश्यले सबैको ध्यानाकर्षण गर्यो। डर लाग्ने दृश्यको एक झलक हेर्नुहोस्
पसिना धेरै आउँछ भने बेवास्ता नगर्नुहोस।क्यान्सरको जोखिम बढ्दै छ।ढिला नहुँदै अन्य यस्ता लक्षण पनि जानी राख्नुहोस
सोचेको भन्दा धेरे मात्रामा छ्याप छ्याप्ती भेटिन थाले नक्कली नोट।सावधान अपनाएर यसरी चिन्नुहोस नक्कली नोट।सेयर गरौ
मुख्य पृष्ठ /International News/आफ्ना नागरिक कु’टिएपछि चीनले खोल्यो मुख, निकाल्यो कडा बिज्ञप्ति ! पुरा पढ्नुहोस !!
आफ्ना नागरिक कु’टिएपछि चीनले खोल्यो मुख, निकाल्यो कडा बिज्ञप्ति ! पुरा पढ्नुहोस !!
नेपाल प्रहरीले निषेधित क्षेत्र तोडेको जनाउँदै चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । बन्दाबन्दीका समयमा निषेधित क्षेत्रको उल्लङ्घन गरी प्रहरीमाथि आ’क्रमण गरेपछि तिनलाई पक्राउ गरिएको सिंहदरबार प्रहरी वृत्तका प्रहरी निरीक्षक वेद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।सिंहदरबार अगाडिबाट साढे ३ बजे करीब २५ चिनियाँलाई पक्राउ गरिएको हो ।
उहाँले निषेधित क्षेत्र तोडे सिंह`दरबार आएर प्रहरीमाथि नै आ’क्रमण गरेपछि उनीहरुलाई नियन्त्र`णमा लिइएको बताउनुभयो । ती नागरिक घर जान पाउनुपर्ने माग राख्दै ‘वी वान्ट टु गो ब्यााक होम’ प्ले कार्ड बोकेर निषेधित क्षेत्र तोडी सिंहदरबारतर्फ आएका थिए । “उनीहरु निषेधित क्षेत्रतर्फ आउन थालेपछि हामीले रोक्यौँ तर उनीहरु नमानेर सिंहदरबार सम्म आए”, उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबार आएर पनि हामीमाथि आ’क्रमण गरेपछि हामीले तिनीहरुलाई नियन्त्रण लिएका हौँ ।”
उनीहरुले प्रहरीको लाठी खोसेर तिनलाई नै हि’र्काएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रहरीले पनि उनीहरुमाथि ला’ठी हा’नेको थियो । लाठी बाट प्रहरी नायब उ`परीक्षक हरिबहादुर बस्ने`तको टा`उकामा चो’ट लागेको छ । प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार बस्नेतसहित नेपाल प्रहरीका पाँच र उनीहरुतर्फ ६ घाइते भएका छन् । पक्राउ गरी तिनीहरुलाई भुकृटीमण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले भद्रकालीबाट नै प्रवेश गर्न नदिए पनि उनीहरु ठेलम`ठेल गर्दै सिंह`दरबार पुगेका थिए । पर्यटक राह दानीमा घुम्न आएका ती चिनियाँ ठमेलबाट रानी`पोखरी, रत्न`पार्क हुँदै सिंहदरबारतर्फको निषेधित क्षेत्रतर्फ आएका हुन् ।
यसै क्रममा चिनियाँ दूतावासले सिंह`दरबार अगा डि आफ्ना नागरिकको प्रदर्शनबारे नेपाल प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेर छलफल भइरहेको जनाएको छ। प्रहरी माथि जाइलाग्ने चार जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी पछि दूतावासले शुक्र`बार राति पौने ११ बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घटनाप्रति जानकार रहेको जनाएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा यो खबर छ । चिनियाँले नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्ने पक्षमा चीन वकालत गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उचित मागबारे भने नेपाल सरकारले ध्यान दिने भन्ने विश्वास लिएको जनाइएको छ।
उसले आफ्ना नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान लामो समय स्थगन हुँदा घर जान हतारिएको जनाएको छ। नेपालमा रहेका चिनियाँ`को सं`ख्या ठूलो रहेकाले चार्टर्ड उडानमा जान नपाएकाहरू जाने प्रयत्नमा रहेका जनाइएको छ। चीनले ३ सय ४० जनालाई लगिसकेको छ। सीमित उडानका कारण धेरै चिनियाँ अझै नेपालमा रहेको जनाउँदै दूता`वासले आफ्ना नागरिकलाई संयम हुन भनेको छ। महा`मा`रीको यो कठिन घडीमा यस्ता घटनालाई संयु क्त रूपमा सम्हाल्दै अघि बढ्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।`
विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारलाई सरकारी खर्चमै उद्दार गर्न आदेश
बलिउडका अभिनेता सुशा`न्तकी पूर्व म्याने`जरक दिशा सलि`यानको मृ त्यु भएको ६ दिनमै सुशान्तले पनि गरे देह त्याग !!
अमेरिका बाट झुटो भिडियो यूटुबमा राखेर नेपालीलाई झुक्याउने युवालाई घरबेटीले समाते (भिडियो)